WiraThu Archives - Page3of 12 - News @ M-Media
အစွန်းရောက်များကြောင့် နာမည်ပျက်လာသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ
ဖေဖော်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၇ M-Media – ထိုင်း၊ မြန်မာနှင့် သီရိလင်္ကာကဲ့သို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုရှိရာ နိုင်ငံများတွင် အမုန်းစကားများ မြင့်တက်လာမှုက အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းနေပြီး၊ အန္တရာယ်ကိုလည်း မြင်နေရသောကြောင့် ထိုကိစ္စအား တွန်းလှန်ရန်အတွက် ထိုနိုင်ငံများက တစ်ခုခု လုပ်ရမည်ဟု[Read More…]
February 9, 2017 — မြန်မာသတင်း
ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ၎င်းနှင့်တူသည်ဟု ပြောကြားလိုက်သည့် မြန်မာဘင်လာဒင်
နိုဝင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၆ M-Media – မြန်မာအစိုးရနှင့် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့တို့၏ လစ်လျူရှုခြင်းကို ခံထားရပြီး မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး အမုန်းမီးကို မကြာခဏ တောက်လောင်စေသည်ဟု အပြစ်တင်ခံရသည့် အမျိုးသားရေးဘုန်ကြီးတစ်ပါးက အမေရိကန်ပြည်သူများ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကို သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့မှုမှာ သက်သေထူလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု[Read More…]
November 18, 2016 — မြန်မာသတင်း
ဦးဝီရသူတို့ မမှန်မကန် ရေးသားမှုတွေ နေဘုန်းလတ် သတိပေး
သြဂုတ် ၇ ၊ ၂၀၁၆ M-Media သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်နှင့် ပတ်သက်၍ လှုံဆော်သတင်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးနေဘုန်းလတ်က သူရဲ့ Facebook အကောင့်မှ တဆင့် အောက်ပါအတိုင်း သတိပေးရေးသားထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျနော် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်[Read More…]
August 7, 2016 — မြန်မာသတင်း
ပါကစ္စတန်-ဘင်္ဂလားဒေရှ် စစ်ပွဲတွင်း ဓါတ်ပုံများကို ရခိုင်များ အသတ်ခံရသည့် ပုံများဟု ဖြန့်ဝေနေ
ဇူလိုင် ၂၄ ၊ ၂၀၁၆ M-Media သတင်း-မြတ်သူရ . ယနေ့ ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့ တွင် မွတ်စလင်မ် မုန်းတီးဆန်ကျင်ရေး လုပ်ဆောင်မှုများဖြင့် နာမည်ကျော်ကြားသည့် ဦးဝီရသူ၏ FB စာမျက်နှာတွင် “ရခိုင်များ[Read More…]
July 24, 2016 — မြန်မာသတင်း
အမျိုးသားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ဦးဝီရသူကို သာသနာအကြည်ညိုပျက်စေမှုဖြင့် နေပြည်တော်အခြေစိုက် လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တစ်ခု၏ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးက တာမွေရဲစခန်းတွင် ဇူလိုင် ၁၁ က အမှုဖွင့်တိုင်ကြားလိုက်သည်။ . ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီက ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဟောပြောပွဲတစ်ခုတွင် ဦးဝီရသူက “ကုလသမဂ္ဂထိုင်ခုံပေါ်ကို ရောက်တယ်ဆိုပြီး[Read More…]
July 13, 2016 — မြန်မာသတင်း